AFG Caravelle Help ndapota
mubvunzo AFG Caravelle Help ndapota
1 gore 9 ago - 1 gore 9 ago #568 by calypso999
Ndakashandisa kuda achibhururutsa AFG Caravelle muna FS9.
Ndakauya mhiri kwenyu nzvimbo uye makwapa pakati Caravelle. Zviri pachena kuti ini paIndaneti uye yakaiswa pamusoro FSX Steam apo ndine zvinoverengeka ndege yakaoma (PT Tu-154B2, DC-9, etc.).
Installation zvakanaka uye nokukurumidza ndakanga kuti yekare yaizivikanwa Caravelle remadziro akatakura.
Kumboda matambudziko maviri zvazvo.
Engines vanoramba kutanga zvakanaka. Ivo kuchasvika imwe RPM uye kana ini kuzarura kutanga mavharuvhu ari revs chete ikoko. No kutanga.
Handikwanisi kuwana ichibhabhamisa angu kubasa. No kufamba pamusoro ichibhabhamisa kuyera uye hapana kwebasa ichibhabhamisa pachavo.
Ndingadai zvechokwadi kuonga rubatsiro / mazano.
Sokuti dambudziko Panel / geji kwandiri. Mumwe munhu ari Steam muchiva ruzivo please25?
Last edit: 1 gore 9 mwedzi yapfuura calypso999.
Time chokusika peji: 0.109 mumasekonzi